Andifuni Ukuva Ibali Lakho LeDama | Martech Zone
Andifuni Ukuliva iBali lakho leDama
NgoLwesibini, Agasti 28, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ixesha le rant. Ibuzzword entsha kuyo yonke imidiya yoluntu kunye nendawo yokuthengisa umxholo ngu Ukuxoxa ngamabali. Sabelane nabanye nge-infographics Ukubalisa amabali kuthelekiswa nokuthetha ngokudibeneyo kwaye Ukubalisa ibali… Kwaye ndingumntu othanda ukubalisa. Ngabaphulaphuli abafanelekileyo, akukho nto ilunge ngakumbi kunabali elilungileyo lokunxibelelana nabaphulaphuli bakho.
Kodwa ngoku sisebenzisa i ibali Yonke into. Iimpawu kufuneka zibalise ibali. Amanqaku kufuneka abalise ibali. Imizobo kufuneka ibalise ibali. I-infographics kufuneka ibalise ibali. Iwebhusayithi yakho kufuneka ibalise ibali. Iposti yakho yebhlog kufuneka ibalise ibali. Isindululo kufuneka sixele ibali. Umboniso kufuneka ubalise ibali.
Kwanele ngamabali adlamkileyo, sele! Kungenxa yokuba enye inkulumbuso kwenye indawo ithethe ngokubalisa amabali ayithethi ukuba sisicwangciso esifanelekileyo kuyo yonke imo yentengiso kunye nabaphulaphuli. Indikhumbuza imeko yoBomi bukaBrian… i Isihlangu luphawu!
Kanye njengokuba isihlangu sasingengomqondiso ovela kuBrian, kananjalo ukubalisa akusiyiyo impendulo kuzo zonke iingxaki zakho zentengiso. Ndiyazi ukuba abanye abantu banqula le gurus yokuthengisa… kodwa thatha iingcebiso zabo ngengqolowa yetyuwa. Abayazi imveliso yakho, ishishini lakho, amaxabiso akho, izibonelelo zakho kunye nezinto ezingalunganga, kwaye ngokungaqhelekanga-abawazi amabali abathengi bakho.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - sele ndilivile ibali.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali-ndifuna ukubhalisa kwi-intanethi.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - andinaxesha lakumamela.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - ndifuna nje ukubona amanqaku.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - ndifuna nje ukwazi izibonelelo.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali-ndiyabazi abathengi bakho kwaye ndifuna imveliso efanayo.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali-ndifuna nje ukubona idemo.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - ndifuna ukulivavanya.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - ndifuna nje ukwazi ukuba lingakanani.
Ngamanye amaxesha, andifuni bali - kufuneka ndilithenge.
ukuxoxa Kunzima kwaye kufuna italente yokwenyani yokwenza imifanekiso ekubhaliweyo, kwimifanekiso nakwividiyo ukuqinisekisa ukuqonda. Ixesha, ithoni, abalinganiswa… zonke iziqwenga kufuneka zibekhona ukuze ibali lisebenze kwaye lichukumise abaphulaphuli abo uthetha nabo.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndenze uphando ngemveliso ebonakala ngathi ilungisa imiba ebesinayo nomthengi. Ndiyazi ukuba umthengi uhlawula malini. Ndiyayazi ukuba ingxaki ibabiza malini. Ndiyayazi indlela endizimisele ukuyihlawula ngayo ukuze ndilahle umba. Indawo yayingenalo lonke ulwazi oluyimfuneko, ngapha koko ndingabhalisela kwangoko nangoko… kodwa kuye kwafuneka ndibhalisele idemo.
Emva kokuba ndibhalisele idemo, ndafumana umnxeba wokulungela kwangaphambili apho ndacelwa uthotho lwemibuzo. Emva kwe-litany yemibuzo, ndakhalaza kwaye ndacela nje idemo. Kwafuneka ndigqibe ukuphendula imibuzo. Nje ukuba ndigqibile, ndacwangcisa idemo. Ngomhla okanye emva koko, ndafika kumnxeba wesiboniso, kwaye umthengisi wavula indawo yakhe yesiqhelo elungiselelwe eyam Persona Kwaye ndaqala ukuxelela ibali.
Ndabacela ukuba bayeke. Wamelana.
Ndibuze ukuba sizokwenza idemo, wawuphepha lo mbuzo. Ndamxelela ke ukuba makanditsalele umnxeba umphathi wakhe ndavala umnxeba. Ngoku ndandixhelekile. Umphathi wakhe wabiza kwaye ndamcela ukuba abonise nje isoftware, echaza ukuba iindleko ziphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali kwaye ukuba isoftware iyilungisile ingxaki, ndikulungele ukuthenga.
Undibonisile idemo. Undixelele ixabiso. Ndithengile.
Ekupheleni komnxeba, wavuma ukuba uzakubuyela umva kwaye ahlengahlengise inkqubo yokuthengisa ukuze afumane iinkampani ezinje ngezam.
Ngelixa ndixabisa wonke umsebenzi omangalisayo owenziwe liqela lakhe ukuhlalutya iimeko zokuphumelela / zelahleko, ukuphuhlisa ii-personas, ukubhala amabali kwabo bantu, ukuseta isicwangciso-qhinga sokumisela kwangaphambili kwaye undondle ngebali elinyanzelekileyo ukuba ndingathenga… khange uyidinge okanye uyifune. Bendingenaxesha lebali. Ndifuna nje isisombululo.
Sukuyithatha le ndlela ngendlela engeyiyo, amabali anendawo yawo kwintengiso. Kodwa Ukuxoxa ngamabali ayisiyiyo panacea yezicwangciso zentengiso. Abanye babandwendweli kwindawo yakho abajongi bali ... kwaye banokukhathazeka kwaye bacinywe yiyo. Banike ezinye iindlela.
Ngoku ukuba i-rant iphelile, eli libali elilungileyo oza kufuna ukulifunda… umhlobo wam (kunye nomthengi), U-Muhammad Yasin kunye noRyan Brock jonga kwimbali ende yabantu ababalisa ibali elifanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Funda kunye njengoko bejonga umhlaba kwimidiya yoluntu kwiminyaka yedijithali kwaye ujonge kwixesha elidlulileyo ukuze ufunde ukuba xa kuziwa kubugcisa bokubhala amabali, kukho akukho nto intsha phantsi kwelanga.
Thatha ikopi yayo Akukho Nto intsha: Imbali eNdilisekileyo yokuBalisa amaBali kunye neMidiya yoLuntu.
Agasti 28, 2012 kwi-11: 34 AM
Itheyibhile enkulu enkulu.
Kananjalo ukuze undihlekise ngentloko yam koku.
Agasti 29, 2012 kwi-11: 42 AM
Enkosi @ twitter-16882886: disqus!
Agasti 29, 2012 kwi-3: 18 AM
UDouglas, eyona ndlela yokuchaza uxabiso lwam ngeli nqaku libali elincinci. Kudala-dala ndandisebenzisa izixhobo ezingqonge iTwitter ndaza ndabona esi sihloko singaqhelekanga, “Andifuni Ukuva Ibali Lakho LeDemon. Ndiye ndalifunda ke eli nqaku ndakhe ndahleka. Kwaye ndahlala ngolonwabo emva koko.
Agasti 29, 2012 kwi-11: 41 AM
@AstroGremlin: disqus ixabisekile! 🙂
Agasti 29, 2012 kwi-4: 51 AM
Amabali amnandi, ukanti sikwihlabathi lesandi sokubetha kunye nabalinganiswa abali-140. Ukhetho lweendlela ezininzi ziluncedo. Iposti yam yakutshanje ephefumlelwe ziikhathuni zikaRupert Bear, ezinomfanekiso, umbongo kunye neprose, zisebenze kakuhle nabantwana bam. Iphepha elide lokumisa, umzekelo, lilungile kwi-SEO nakwabanye abafundi, kodwa ividiyo kunye neqhosha 'lokuthenga-ngoku / kwenyathelo elilandelayo' zibonelela ngeendlela ezizezinye zokuhamba.
Agasti 29, 2012 kwi-11: 43 AM
@markstonham: disqus ndisayithanda ikopi ende ... kodwa njengoko usitsho, ukhetho luluncedo. Enkosi!
Sep 1, 2012 ngo-5: 36 PM
Kuyamangalisa ukuba wonke umntu ubonakala enenkolo yokubalisa.
Endaweni yokuthetha ibali, kukho into ekufuneka ithethwe ngokusebenzisa iindlela zokubalisa amabali kunxibelelwano lweshishini.
Ukuba uyisika le engundoqo, imalunga nokusebenzisa ulwimi ukufumana ingqalelo yomntu okanye ngcono kodwa ubambe. Ngokucacileyo, unxibelelwano oluwela kwi-quadrant engacacanga luvelisa impendulo kwelinye icala lesiphelo.
Ndingaphikisana nesihloko sakho sisebenzisa ubuchule bokubalisa ngokuthatha indawo yesivumelwano.